Tech-Net-Game Nhau - Peji 2
Windows 10 LTSB inova Windows 10 LTSC
Microsoft yakarondedzera zvakare munaApril ye2017 kuti yaizosunungura zvirongwa zviviri zvayo Windows 10 operating system pagore; imwe muna March uye imwe muna September wegore rimwe nerimwe. The Windows 10 Vagadziri Gadziriso, yakaburitswa kumashure muna Kubvumbi 2017, yaive yekutanga ficha yekuvandudza ye Windows 10 izvo zvakatevera chirongwa chitsva chekuburitsa. Iyo Yekugadzira Vagadziri Yekuvandudza, iyo ichabuda mu… [Verenga zvakawanda ...] pamusoro Windows 10 LTSB inova Windows 10 LTSC
Kutamba mitambo pama-ultrabook kana malaptops akatetepa uye akareruka angave aiita seasingaite nguva yadarika, asi ichokwadi mazuva ano. Kunyangwe kuve nemitumbi ine compact, mazhinji emazuva ano ma ultrabook anorongedza zvine simba-zvakaringana Hardware kubata nemazita mashoma achangoburwa. Paunenge uchitsvaga ultraportable yekutamba kabhuku iwe unogona kusarudza muchina une akasanganiswa magiraidhi, uye chero uchiwana imwe ... [Verenga zvakawanda ...] nezve Akanakisa makumi matatu emitambo ekubhejera uye anotakurika malaptop muna30
Iyi NotPetya Rudzikunuro Kill switch inomisa yazvinohlengwareware mumakwara ayo
A Kill Switch kana Vaccination yePetrwrap kana NoPetya kana NotPetya Ransomware yakawanikwa iyo inogona kuuraya ransomware mumakwara ayo uye kuchengetedza komputa yako kubva kutapukirwa. Iyo NotPetya Ransomware yakatogadzira mhirizhonga munzvimbo zhinji dzepasi. NotPetya inoshandisa EternalBlue kusagadzikana iyo inokanganisa makomputa uchishandisa SMBv1. Inoshandisa zvakare Windows WMIC uye… [Verenga zvakawanda ...] nezve Iyi NotPetya Rudzikunuro Kill Chinja chinomisa yazvinohlengwareware mumakwara ayo
Mozilla Firefox Nzvimbo Yacho In Windows 10
Firefox profiles dzakafanana neakaundi account mu Windows uchishandisa system. Kunge Windows inoshanda sisitimu, Firefox inoshandisa maakaundi kuchengetedza data remushandisi. MuFirefox, maakaundi emushandisi anonzi maprofile. Chimiro chinosanganisira ruzivo rwemushandisi senge mapassword, mabhukumaki, zvaunofarira, nhoroondo, uye imwe data. Pamusoro peiyo default profile, iwe unogona zvakare kugadzira zvimwe ... [Verenga zvakawanda ...] nezve Mozilla Firefox Mbiri Nzvimbo Mune Windows 10
Maitiro Ekuchinjisa Avast License KuNew / Imwe Computer
Avast imwe yemhinduro dzinoshandiswa zvakanyanya antivirus. Avast Yemahara Antivirus ye Windows iri kushandiswa nemamiriyoni evashandisi vePC kuchengetedza data ravo kubva kumavhairasi uye kumwe kutyisidzira. Pamusoro peAvast Yemahara Antivirus, nhamba yakakosha yevashandisi vePC vanoshandisa Avast Pro Antivirus, Avast Internet Security, uye Avast Premier yekudzivirira kwepamusoro uye chengetedzo… [Verenga zvakawanda ...] nezve How To Transfer Avast License To New / Another Computer
Maitiro Ekumhanya sfc / scannow Sisitimu File Checker pane External Drives
Zvekushanda chaiko Windows inoisa mamwe akakosha system mafaera pakombuta yako. Aya mafaera akachengetwa mu Windows yekuisa dhairekitori uye yakakosha kune iyo Windows uchishandisa system. Chero kukuvadzwa kana huori hwemafaira aya zvinogona kudzima mamwe maficha kana kunyatso gwamba sisitimu. Vashandisi vanowanzo sangana nenyaya kupi Windows haikwanise kutanga kana kuti… [Verenga zvakawanda ...] nezve Maitiro Ekumhanya sfc / scannow Sisitimu File Checker pane External Drives
'Spider-Man' Yeiyo PS4: Ruzivo Pamepu Saizi, Nhau Yezvinyorwa & Ma villains Anoratidzwa
Th PlayStation 4-yakasarudzika "Spider-Man" mutambo wakaratidzwa pamusangano weSony E3 2017 nevatori venhau kutanga svondo rino, uye Insomniac Mitambo yakaratidza zvimwe zvitsva nezve mutambo. Mugadziri uyu anoti mepu yemutambo we “Spider-Man” ichave hombe uye kuti vatambi havazokwanisa kuuraya mhandu. "Saizi yemepu ingangopeta kana kana katanhatu iyo 'Sunset Overdrive,'” ... [Verenga zvakawanda ...] nezve 'Spider-Man' Yeiyo PS4: Ruzivo Pamepu Saizi, Nyaya yenyaya & Villains Zvakaratidzwa
'Clash Royale' Balance Shanduko: Night Witch, Goblin Gang, Tornado uye Zvimwe Get Nerfed MunaJune 12 Gadziriso.
Balance shanduko iri kuuya kuClash Royale Chikumi 12, iine anopfuura gumi makadhi achiona mabhuni kana nerfs, kusanganisira Night Witch, Goblin Gang uye nezvimwe. Tarisa uone izere ruzivo rweJune 10 Balance Change inogadziridza, pano.Balance shanduko iri kuuya kuClash Royale June 2017, aine anopfuura gumi makadhi anoona mabhu kana maNefs, anosanganisira Night Witch, Goblin Gang uye nezvimwe. Tarisa uone zvakakwana… [Verenga zvakawanda ...] nezve 'Clash Royale' Balance Shanduko: Night Witch, Goblin Gang, Tornado uye Zvimwe Get Nerfed Muna June 12 Gadziriso.
Spotify Inobatanidza Eventbrite Concerts Kuwedzera Matiketi Zvimiro
Eventbrite yakazivisa kuti yakabatanidza sevhisi yayo paSpotify kusimudzira zviitiko zvayo pamhanzi yekufambisa sevhisi app. Zviitiko zveEventbrite zvino zvave kuwanikwa mu "Concerts" tab paSpotify. "Eventbrite yakatanga mubatanidzwa mutsva wekusimudzira otomatiki makonzati ayo nemitambo yemimhanzi kune vateereri veSpotify vanopfuura mamirioni zana emimhanzi," ... [Verenga zvakawanda ...] pamusoro peSpotify Inobatanidza Zviitiko zveBritbrite Kuwedzera Matiketi
Razer Inovandudza Iyo Razer Blade Stealth: More Screen, Pasina Bezel, Nyowani Ruvara Sarudzo
Kubva Razer paakapinda mumusika weUltrabook, ivo vakapa rakasimba laptop muchikamu chinotakurika. Iyo yekutanga vhezheni yakadzoserwa kumashure mu2016, uye kunyangwe yaive nezvimwe zvainetsa, kunyanya hupenyu hwebhatiri, Razer akaigadziridza kakati wandei kuti abatsire kugadzirisa izvo. Chinhu chimwe chete icho chakange chakaomarara kusacherekedza asi ndechekuti yaive nemazizi makuru ekuratidzira, apo yakawanda ye… [Verenga zvakawanda ...] nezve Razer Kugadziridza Iyo Razer Blade Stealth: Zvimwe Screen, Pasina Bezel, Nyowani Ruvara Sarudzo
Zvinoda Kubhadharwa: Payback Zviratidzo: Zvakanaka Zvakanaka Kufara. Kwete Hasha Zvikuru.
Anopfuura makore gumi nematanhatu mushure meKutsanya neKutsamwa kwaita chizvarwa chese kudanana nemotokari dzinomhanya uye mabhachi emhuri, zvaiita senge Electronic Arts yakazoziva kuti zvingaite sei kurongedza chiitiko ichocho chePC uye varidzi vekoni. Asi kana Kuda Kumhanyisa: Kubhadhara kuri kunyatso kuburitsa yedu yemukati Dom Toretto, EA yakaita basa rakashata rekugadzira ... [Verenga zvakawanda ...] nezve Kudiwa Kwekumhanyisa: Kubhadhara kudzoreredzwa: Zvichiri Kunaka Kwazvo. Kwete Kushatirwa Zvakanyanya.
NVIDIA Inozivisa Destiny 2 Bundle yeGeForce GTX 1080 & 1080 Ti Makadhi
NVIDIA yazivisa zvekare mumwe mutambo bundle, panguva ino kubatanidza Bungie-yakawanda-inotarisirwa Destiny 2 neNVIDIA anonyanya kuita GeForce GTX 1080 uye 1080 Ti. MaSystem (anosanganisira iyo NVIDIA yeGeForce GTX Battlebox) uye malaptop ane makadhi aya anozokodzerawo bundle. Iyo bundle inosanganisira zvese Destiny 2 uye yekutanga PC beta kupinda, iyo yakarongedzwa ... [Verenga zvakawanda ...] nezveNVIDIA Inozivisa Destiny 2 Bundle yeGeForce GTX 1080 & 1080 Ti Makadhi